PC ကွန်ပျူတာစာ Booster ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအင်စတောလုပ် (WINDOWS တွေ 7,8/10 OR MA
PC ကွန်ပျူတာစာ Booster ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးအင်စတောလုပ် (WINDOWS တွေ 7,8/10 သို့မဟုတ် Mac)
အောက်တိုဘာလ 12, 20170မှတ်ချက်များ
1 PC ကွန်ပျူတာစာ Booster APP
1.0.0.1 ရှိပါတယ်3သင်၏ Windows သို့မဟုတ် Mac PC ပေါ်မှာဒီ app ကို install လုပ်ဖို့နည်းလမ်းများ.
1.0.2 Messaging ကို Booster Install- Nox နှင့်အတူ PC ကိုအတွက်လျင်မြန်စွာစာပြန်ရန် App ကို
PC ကွန်ပျူတာစာ Booster APP
သငျသညျစာတိုပေးပို့ရေးအာနိသင်တိုးမြှင့်လိုအပ်သည်ထက်သင်ရုံမျိုးစုံစာတိုပေးပို့ရေး app များကိုကိုင်တွယ်ရန်ငြီးငွေ့ခံစားရနှင့်သင်တစ်စုံတစ်ဦးကို reply ရန်သင့်ဂိမ်းခေတ္တရပ်တန့်ပြီးရန်လိုအပ်ပါတယ်.
သင်အလွယ်တကူသင့်ရဲ့ကအကြောင်းမရှိဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ် android စာပို့ခြင်းအာနိသင်တိုးမြှင့် app တစ်ခုတကယ်ပယ် switching မရှိဘဲမျက်နှာပြင်ကနေ reply တစ်ခုသို့မဟုတ်ဂိမ်းခဏရပ်ရန်ကူညီပေးသည်နှင့်အတူ. သင်အမှန်တကယ်သင်တူညီတဲ့မျက်နှာပြင်ကနေလုပ်နေတာနဲ့အကြောင်းပြန်နေကြတယ်ဆိုတာကိုအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်အကြောင်းမရှိသင်ဟာစာပို့ခြင်းအာနိသင်တိုးမြှင့် app တစ်ခုနှင့်အတူပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေနိုင်ပါတယ်. ငါတှေ့ 10 လူကြိုက်အများဆုံးစာပို့ခြင်းအာနိသင်တိုးမြှင့် app တွေအခုအချိန်မှာ.
ရှိပါတယ်3သင်၏ Windows သို့မဟုတ် Mac PC ပေါ်မှာဒီ app ကို install လုပ်ဖို့နည်းလမ်းများ.
Nox app ကိုကစားသမား
ဒါကအားလုံး pc များအတွက် Android device ကို emulator ဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်.
BlueStacks သင် pc ပေါ်မှာ android app များကို run ဖို့ခွင့်ပြု android emulator ဖြစ်ပါတယ်. သူတို့တစ်တွေအမှန်တကယ်စက်ပစ္စည်းပေါ်ရှိ App ကိုစမ်းသပ်မရနိုင်သည့်အခါအချို့က android developer များမှဒီဆော့ဗ်ဝဲကိုအသုံးပြုဖို့နှင့်အခြား emulator ပျက်ကျ. ဒါကအခုရေပန်းအစားဆုံးဟာ android အတုယူဆော့ဝဲဖြစ်ပါသည်.
အစအဦးအဘို့သင်သည်သင်၏ PC ပေါ်မှာ BlueStacks တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်ပါတယ်. သင်ဒီမှာကနေ Download ပြုလုပ်နိုင်ပါသည်.
ထိုနောက်မှသင်သည်သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် BlueStacks ကိုဖွင့်ဖို့လိုအပ်.
BlueStacks စတင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ပြီးတာနဲ့, ကလစ် အကြှနျုပျ၏ Apps ကပ အဆိုပါ emulator အတွက်ခလုတ်
အားရှာဖွေခြင်း: messaging Booster app ကို
သင်ရုံက install Messaging ကို Booster app ကို app ကိုအဘို့အရှာဖွေရေးရလဒ်မြင်ရပါလိမ့်မည်
Google ထံမှ apps များ BlueStacks အပေါ် Play ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ရန်သင်၏ Google အကောင့် Login
သဲလွန်စ: သငျသညျရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင် သယ်ဆောင်နေပါသည် BlueStacks ဆော့ဗ်ဝဲနဲ့ပြဿနာရိုးရှင်းစွာ install Microsoft က .net Framework ကို သင့်ရဲ့ PC မှာဆော့ဖျဝဲ. သို့မဟုတ်သင့်ပြဿနာကိုအောက်တွင်မှတ်ချက်ပေးရန်.
သဲလွန်စ: သင်တို့သည်လည်းလုပ်နိုင် Messaging ကို Booster app ကို APK ဖိုင် Download သငျသညျချင်လျှင် BlueStacks က Android emulator ပေါ်မှာ install.
android ဖုန်းနှင့်အတူ, သင်အလွယ်တကူနဲ့အလျင်အမြန်အားလုံးသင့်ရဲ့လူမှုမီဒီယာပလက်ဖောင်းမှ reply နိုင်ပါတယ်.
သငျသညျ Messaging ကို Booster ဒေါင်းလုဒ်ဆွဲနိုင်ပါသည်- quick စာပြန်ရန် App ကို 1.7.7 နောက်ပိုင်းမှာသင့်ရဲ့ PC မှာ Android ကို emulator ပေါ်မှာ install လုပ်ရန်သင့် PC ကိုအတွက် APK ကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်လို့ဖိုင်.
Messaging ကို Booster Download- quick စာပြန်ရန် App ကို APK ဖိုင်
Messaging ကို Booster Install- Nox နှင့်အတူ PC ကိုအတွက်လျင်မြန်စွာစာပြန်ရန် App ကို
PC ကွန်ပျူတာများတွင် nox app ကိုကစားသမား Install
ဒါဟာက Android emulator ဖြစ်ပါတယ်, PC ကွန်ပျူတာများတွင်ပြေး Nox ကို install ပြီးနောက်, နှင့် Google အကောင့် login
Tab ကိုရှာဖွေသူနှင့်အဘို့အရှာဖွေရေး: messaging Booster- quick စာပြန်ရန် App ကို
Messaging ကို Booster Install- သင့်ရဲ့ Nox emulator အပေါ်လျင်မြန်စွာစာပြန်ရန် App ကို
တပ်ဆင်ပြီးစီးသည်နှင့်တပြိုင်နက်, သငျသညျ Messaging ကို Booster play နိုင်ပါလိမ့်မည်- သင့်ရဲ့ PC မှာလျင်မြန်စွာစာပြန်ရန် App ကို
သငျသညျ Messaging ကို Booster ကို install များအတွက် Nox ကစားသမားကိုအသုံးပြုနေလျှင်- pc အတွက်လျင်မြန်စွာစာပြန်ရန် App ကို, အဆိုပါ emulator အတွင်းပေးထားရွေးစရာတခုရှိတယ် (Ctrl + ++ အဆိုပါ shortkey ဖြစ်ပါသည်).
Android App များ	အကောင်းဆုံး pomodoro timer နေရာမှာပြတင်းပေါက်, အာရုံအာနိသင်တိုးမြှင်အခမဲ့, အာရုံအာနိသင်တိုးမြှင်ပြန်လည်သုံးသပ်, အာရုံကို download ariana Grande, အခမဲ့ pomodoro timer နေရာမှာ mac, အခမဲ့ pomodoro timer နေရာမှာပြတင်းပေါက်, ခရမ်းချဉ်သီး app ကို chrome, ခရမ်းချဉ်သီးပြတင်းပေါက် timer 10	bookmark
ယခင်အပိုဒ် LUDO STAR ကို Download လုပ်ပြီး Install : 2017 (သစ်) PC ကို IN (WINDOWS တွေ 7,8/10 သို့မဟုတ် Mac)
next ကိုပုဒ်မ အလယ်ခေတ်စစ်ပွဲတိုက်ပွဲများ Fantasy